Anyị maara na anyị anaghị efunahụ ụfọdụ site na ịmanye ọdịnaya anyị n'elu ikpo okwu. Anyị na-atụ anya ịnweta ụdị ọhụụ, na Bluebridge nwere ezigbo ngwaọrụ. Ha na-arụ ọrụ dị egwu ma na-eto ngwa ngwa.
Ọganihu ngwa ngwa nke smartphone na mbadamba mbadamba emetụtala ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ akụkụ ọ bụla nke ahịa dijitalụ. Mmetụta a sitere na mgbanwe 'Mobile-friendly' nke kachasị ọhụrụ na-agbanwe agbanwe na nsonaazụ ọchụchọ Google site na nsonaazụ ntụgharị dị ala na smartphones, iji usoro mgbasa ozi na mkpanaka ma hụ na ozi ịntanetị anyị na-emegharị mmekọrịta. Dave Chaffey